ဆေးထိုးအပ်ဝမ်းနည်းဘို့အမြင့်အပူချိန် filter ကိုအိတ် China Manufacturer
Glass ကို Fiber အမြင့်အပူချိန် Filter ကို Bag,မြင့်မားသောအပူချိန် Flumus ဖုန်မှုန့်အိတ်,Fluometh ဖုန် Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Glass ကို Fiber အမြင့်အပူချိန် Filter ကို Bag,မြင့်မားသောအပူချိန် Flumus ဖုန်မှုန့်အိတ်,Fluometh ဖုန် Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် > ဆေးထိုးအပ်ဝမ်းနည်းဘို့အမြင့်အပူချိန် filter ကိုအိတ်
 ဆေးထိုးအပ်ဝမ်းနည်းဘို့အမြင့်အပူချိန် filter ကိုအိတ်
ယက် filter ကိုအထည်, ဖုန်မှုန့်အိတ်, nonwoven filter ကိုအထည်နှင့် duster filter ကိုအိတ်: အအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းအရ, ကအဓိကအားဖြင့်သုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
1, ယက် filter ကိုအိတ် filter ကို: ဒေါင်လိုက်ကြိုးနှင့်စာတစ်စောင်ဒဗလျူအတွက်တစ်ဦးအချို့သောအဖွဲ့အစည်းကစည်းမျဉ်းနှင့်အညီဒေါင်လိုက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ဖောက်မျှင်စီစဉ်ဖို့ရက်ကန်းသုံးပြီး
2, Non-ယက် filter ကိုအိတ် filter ကိုအိတ်: အထွေထွေချည်ငင်ခြင်းနှင့်ယက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်အလွှာတွင်ပိုက်ကွန်သို့မဟုတ်ချည်စအမျှင်ဓာတ်, ယှက်နွယ်, လျှက်ရှိကြောင်းခြင်းမရှိဘဲ, needled, စာကဘနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ filter ကိုပစ္စည်းအရည်ကျိုသို့မဟုတ်ဗိုင်းငင်စာရွက် ထိုစာ၏စုပေါငျးစာတစ်စောင်၏နည်းလမ်း;
3. Composite filter ကိုအထည်အိတ်: filter ကိုအိတ်နှစ်ယောက်ထက်ပိုနည်းလမ်းများနဲ့လုပ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပစ္စည်းကို လုပ်. , အက္ခရာ C. ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သော
, မြို့ပတ်ရထားပြားချပ်ချပ်နှင့်မမှန်: အ filter ကိုအိတ်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အရ, ကသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
1, ပတ်ပတ်လည်: ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ် Cylinder ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များ: D * L ကို (မီလီမီတာ) ကအချင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
2, ပြားချပ်ချပ်: filter ကိုအိတ်စတုဂံများနှင့် trapezoid အပါအဝင်ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များလုံးပတ် * အရှည် (P * L ကို (မီလီမီတာ)) တို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
3, ဂြိုလ်သား: အဘယ်သူ၏သတ်မှတ်ချက်များသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တိကျတဲ့ filter ကိုအိတ်။
ဖုန်မှုန့်အထည်အိတ်များ၏လျှောက်လွှာကိုအလွန်ကျယ်ပြန့်နှင့် ironmaking စက်ရုံ, သံမဏိချမှတ်ခြင်းစက်ရုံ, ferroalloy စက်ရုံ, ဆန့်ကျင်ဘက်စက်ရုံ, foundry နှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံစသည်တို့ကိုစွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့မီးရှို့ဖျက်ဆီး, ကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ဘွိုင်လာ, fluidized အိပ်ရာ၏ flue ဓာတ်ငွေ့ကုသမှုနှင့်ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည် ဘွိုင်လာနဲ့အခြား flue ဓာတ်ငွေ့ filtration ။ ကတ္တရာကွန်ကရစ်ရောစပ်, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဘိလပ်မြေ, ကြွေထည်, ထုံး, gypsum နှင့်အခြားထုတ်လုပ်မှုဆိုဒ်များ။ လူမီနီယံကိုလျှပ်စစ်သုံး, ခဲ, သံဖြူ, သွပ်, ကြေးနီနှင့်အခြားရှားပါးသတ္တု, ချောပစ္စည်းပြန်လည်နာလန်ထူ, အရည်နှင့်အစိုင်အခဲခွဲခြာများအတွက် Smelter ဓာတ်ငွေ့ filtration ။ ဓာတု, Coke, ကာဗွန်အနက်ရောင်, dyestuff, ဆေးဝါး, ပလပ်စတစ်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ဒဏ်ငွေပစ္စည်းများအရည်အစိုင်အခဲခွဲခြာနှင့်ပြန်လည်။ ဒါကြောင့်အပေါ်သတ္တုတွင်းစပါးအပြောင်းအလဲနဲ့, မုန့်ညက်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, သစ်သားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဖုန်မှုန့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သန့်စင်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Glass ကို Fiber အမြင့်အပူချိန် Filter ကို Bag , မြင့်မားသောအပူချိန် Flumus ဖုန်မှုန့်အိတ် , Fluometh ဖုန် Bag , P84 အမြင့်အပူချိန် Filter ကို Bag , အနိမ့်အပူချိန်ဖုန် Filter ကို Bag , HD ကိုအမျိုးအစားလူပျိုစက် Bag Filter ကို , စက်မှုဆီလီကွန် Filter ကို Bag , ဆိုင်ကလုန်း Filter ကို Bag